Aqal Sare oo diiday ka qeyb galka kulankii Farmajo iclaamiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Aqal Sare oo diiday ka qeyb galka kulankii Farmajo iclaamiyay
Senatarada Golaha Aqalka Sare ee BFS ayaa lagu wargaliyay in uusan jirin kulan uu Goluhu la yeelanayo Madaxweynaha JFS Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoonka Aqalka Sare ayaa sheegay in uusan jirin kulan wadajir ah oo Madaxweynuhu kasoo codsadey Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare.
Guddiga ayaa sheegay in uusan jirin codsi shacri ah oo waafaqsan Qod.57aad (c) ee Dastuurka KMG ah iyo Qod.59 aad (4) ee Xeerhoosaadka Golaha, sidaas daraaddeed uusan Aqalka sare qeyb ka ahayn kulanka Farmaajo iclaamiyay.
War qoraal ah oo kasoo baxay Guddoonka Aqalka Sare ayaaa lagu yiri,
“Wargelin: Dhammaan Senatarada Golaha Aqalka Sare ee BFS waxaa lagu wargelinayaa in uusan jirin kulan wadajir ah oo Madaxweynuhu kasoo codsadey Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare si waafaqsan Qod.57aad (c) ee Dastuurka KMG ah iyo Qod.59 aad (4) ee Xeerhoosaadka Golaha. Sidaas darteed, ma jiro kulan wadajir ah oo ay xubnaha Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya u ballansan yihiin birito oo taariikhdu tahay 06 Jannaayo 2021”.
Khilaafka ka dhaxeeya Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi iyo Madaxweyne Farmaajo ayaa gaaray halkii ugu sarreysay, iyadoo Cabdi Xaashi loo diiday inuu ka qeyb galo shirka ka Socda dhuusamareeb oo looga hadlayo arrimo ay ka mid tahay midda ay isku hayaan labadaan masuul.
Keydmedia Online ayaa ogaatay in Farmaajo uu ku dhawaaday inuu maanta ka soo duulo Dhuusamareeb, hayeeshee uu baaqday kadib cadaadis xooggan oo uga yimid Beesha Caalamka, sidoo kale KON ayaa fahansan in Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya, Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo wakiilka gaarka ah ee xoghayaha QM ee Soomaaliya ay wadaan dadaal lagu baajinayo kulankii birri Farmaajo hor tagi lahaa Baarlamaanka.